प्लेनमा प्रयोग हुने सामग्री प्रयोग गरि बनाइयो विद्युतीय बाइक – Medianp
प्लेनमा प्रयोग हुने सामग्री प्रयोग गरि बनाइयो विद्युतीय बाइक
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५०९:४६0
काठमाडौं, २९ असार । भारतीय कम्पनी ट्रोन्क्स मोटरले क्रसओभर विद्युतीय बाइक सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार भारतमा सार्वजनिक भएको उक्त बाइकको नाम ट्रोन्क्स वान रहेको छ । यो विद्युतीय बाइकको सुश्रवाती मूल्य ४९ हजार ९ सय ९९ भारु रहेको छ । यो मूल्य बाइक सार्वजनिक हुनु अघि बुकिङ गर्नेहरुका लागि मात्र भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो विद्युतीय बाइक दुई रंग रातो र निलोमा उपलब्ध छ । साइकल जस्तै देखिने यो विद्युतीय बाइलले फुल चार्ज गर्दा ४० देखि ५० किलोमिटरको दुरी तय गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रिबुक गर्नेहरुले १६ जुलाईदेखि यो बाइक पाउँछन् । पहिलो ट्रोन्क्स मोटरको नाम भोल्टा मोटर्स थियो ।
ट्रोन्क्स वान बाइक र इलेक्ट्रिक बाइकको क्रसओभर भर्सन हो । यो बाइक २५ किलोमिटर प्रतिघण्टा कुद्न सक्छ र यसमा केही राइड्रि मोड सकेत छ । यो बाइकमा प्लेन बनाउँदा प्रयोग गरिने मटेरियल प्रयोग गरेर बनाइएको कम्पनीको दाबी छ ।
यो बाइकमा १३.६ एएच लिथियम ५०० वाटको व्याट्रि रहेको र यसले ३६ भोल्ट उत्पादन गर्छ । ट्रोन्एक्स वान फुल चार्जमा ५० किलोमटिर कुद्ने र इलेक्ट्रोनिक गेयर असिस्ट मोडमा लगाउँदा ७० देखि ८० किलोमिटर सम्म कुद्ने कम्पनीले जनाएको छ । ट्रोन्एक्स मोटरले ९ वटा सहर मुम्बइ, गोआ, पुने, नयाँ दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद लगायत सहरबाट सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा भ्वाङ पर्दा, नियमित उडान प्रभावित
भुकम्पपीडितको नाममा ल्याएको जस्ता बिक्री नगर्दा साल्ट्र टेडिङलाई १८ करोड घाटा
आज पनि मानिसहरु यो शिवको मूर्ती छुन किन डराउँछन्
१५ वर्षे किशोरले गर्लफ्रेन्ड गर्भवती भएको कुरा मम्मीलाई सुनाउँदा यस्तो कुटाइ खाए ! (भिडियोसहित) 
किन देखिन्छ गुगलमा ट्वाइलेट पेपर सर्च गर्दा पाकिस्तानी झण्डा ? यसो भन्छ गुगल
अकस्मात हातबाट यी चीज झर्छ भने सम्झनुहोस् दुर्भाग्य !
आफुलाई भर्जिन बताउने एक युवतीले अनौठो तरिकाले जन्माइन् बच्चा
अपरिचित महिलाको १० हजार डलरको औँठी भाडामा लिएर गर्लफ्रेण्डलाई प्रपोज !